ချင်းပြည်သူများက ဆေးရုံထက် ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါး ပိုမိုလိုအပ်ဟု စစ်ထောက်ချုပ်ထံ တင်ပြ |
« နအဖတပ်စခန်း တခု မီးလောင်
ရယကအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစိုးရ ဝန်ထမ်းများအား ကြံ့ခိုင်ရေးကပ် အတင်းထုတ်ပေး »
ချင်းပြည်သူများက ဆေးရုံထက် ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါး ပိုမိုလိုအပ်ဟု စစ်ထောက်ချုပ်ထံ တင်ပြ
၁၃ မေလ ၂၀၁၀၊ မကြာသေးခင်က ချင်းပြည်နယ်သို. လူကြီးခရီးစဉ်ဖြင့်ရောက်ရှိလာသော စစ်ထောက်ချူပ် ဒုတိယဗိုလ်ချူပ်ကြီး အုန်းမြင့်ထံသို. ချင်းပြည် သူများက ပြည်သူ.ဆေးရုံထက် ဆရာဝန် နှင့် ဆေးဝါးများပိုမိုလိုအပ်ကြောင်းတင်ပြခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
Bureau of Special Operations (BSO) Commander Lieutenant General ဒုတိယ ဗိုလ်ချူပ်ကြီးအုန်းမြင့်သည် စစ်ကိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူးဗိုလ်ချူပ်မြင့်စိုး နှင့်အတူ ချင်းပြည်နယ် သို.ဧပြီလနောက်ဆုံးပတ်ကရောက်ရှိလာပြီး တီးတိန်မြို.ပြည်သူ.ဆေးရုံတိုးချဲ. ဆောင်ကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
ဆေးရုံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် တီးတိန်မြို.ဒေသခံပြည်သူများက ဆေးရုံအဆောက်အဦး သစ်များထက် ဆရာဝန်များနှင့် လုံလောက်သည့် ဆေးဝါများချပေးရန် ဗိုလ်ချူပ်ကြီး အုန်းမြင့်ထံတင်ပြခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
“ပြည်သူ့ဆေးရုံရှိပေမဲ့ ဆရာဝန် နှင့် ဆေးဝါးက မရှိဘူး၊ အဲဒါကြောင့် ဒေသခံပြည်သူတဦး က ပြည်သူကိုယ်စား ဗိုလ်ချူပ်ကြီးထံ တင်ပြတယ်၊ တုံ့ပြန်မှုတော့ မရှိဘူး”ဟုဆေးရုံဖွင့်ပွဲသို. တက်ရောက်သူဒေသခံတဦးကပြောသည်။
စစ်အစိုးရသည် နယ်စပ်ဒေသဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်တခုအနေဖြင့် ကုတင် တစ်ရာ ဆံ့ တီးတိန်ပြည်သူ.ဆေးရုံးကြီးကို ကုတင် နှစ်ရာ ဆံ့သို.တိုးချဲ.ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို.သော် လည်း ယနေ.အထိ တီးတိန်ပြည်သူ.ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးဝါးမလုံလောက်မှုပြသာနာနဲ. ရင် ဆိုင်နေကြရဆဲဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။
တီးတိန်မြို့နယ်မှ ဦး ထန်လဲန်ပျန်က “လိုင်တွီးရွာဟာလည်းတိုက်နယ်ဆေးရုံရှိပေမဲ့ ဆေးဝါး လုံးဝမရှိဘူး” ဟုခိုနူမ်းထုန်ကိုပြောပြသည်။
ယင်းကဲ့သို.လူနာများကုသရန် ဆေးဝါးများလုံလောက်စွာမရှိသည့်အတွက် ဒေသခံအများစုသည် ကလေးမြို့၊မီဇိုရမ်ပြည်နယ် ကျန်ဖိုင်း ဆေးရုံများသို့ သွားရောက် ကုသနေကြသည်ဟုသိရသည်။
ဗိုလ်ချူပ်ကြီးအုန်းမြင့်သည် တီးတိန်မြို.သို.မသွားခင် ဖလမ်းမြို.တော်ခန်းမဆောင်တွင် အစည်း အဝေးတရပ်ကျင်းပပြုလုပ်ပြီး ပြည်သူ လူထုနဲ.တွေ.ဆုံခဲ့သေး သည်ဟုသိရသည်။
ယင်းအစည်းအဝေးတွင် အစိုးရ၀န်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူများစည်းစည်းလုံးလုံးပူးပေါင်းနိုင်မှ သာ နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေး တက် ရောက်လာသူများကို ငွေစက္ကူ ၁၀၀ တန်တရွက်စီပေးသွားခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
ယခုခရီးစဉ်တွင် တီးတိန်ပြည်သူ.ဆေးရုံဖွင့်လှစ်အပြီး အမှတ်(၂)နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း အခြေစိုက်ရာ ရိဒ်မြို.သို. ပြန်လည်ထွက်ခွာ သွားသည့်အချိန်တွင် ဗိုလ်ချူပ်အုန်းမြင့် တို.နဲ.အတူလိုက်ပါသွားသည့် ချင်းပြည်နယ်ဗျူဟာမှူးဗိုလ်ချူပ်ဟုန်းငိုင်စီးနှင်သည့်ကားမှောက် သွားသောကြောင့် ခရီးစဉ်ကိုဖြတ်သိမ်းခဲ့ရသည်။